MURUGO: Ciyaartoy MUSLIM Ah Oo La Xaqiijiyey Inuu Ku Dhintay MASAAJIDKII New Zealand Ee Muslimiinta Lagu Xasuuqay - GOOL24.NET
MURUGO: Ciyaartoy MUSLIM Ah Oo La Xaqiijiyey Inuu Ku Dhintay MASAAJIDKII New Zealand Ee Muslimiinta Lagu Xasuuqay
March 17, 2019 Cabdiwahab Ahmed
Sawirkani, waa imaamka Masaajidka dadka lagu laayay
Dunida Muslimka ayaa weli la tiiraanyoonaysa murugada weerarkii argagixisada ee lagu qaaday Muslimiin ku tukanayey laba masaajid oo ku yaalla badhtamaha magaalada Christchurch ee waddanka New Zealand Jimcihii doraad.
In ka badan 50 qof ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen, waxaana dhaawac ah 50 kale oo 11 ka mid ah ay xaalad halis ah ku jiraan, kuwaas oo xaaladdooda lagula tacaalayo cusbitaallada caasimadda dalkaas ee Christchurch.
Sidii aanu baahinay Sabtidii, weerarkan waxa ka badbaaday 17 ciyaartoy oo ka tirsan xulka qaranka Cricket-ka ee dalka Bangladesh oo iyagoo dhawr tallaabo u jira masaajidka oo ay doonayeen inay ku tukadaan Salaaddii Jimcaha ay bilaabantay rasaasta lagu xasuuqay Muslimiinta.
Ciyaaryahannadaas ayaa dib ugu laabtay baskii ay ka dageen, mana jirin wax dhibaato ah oo soo gaadhay, hase yeeshee waxa la xaqiijiyey in goolhayihii xulka qaranka New Zealand ee kubadda futsal-ka loo yaqaano uu ka mid ahaa dadkii gudaha masaajidka ku dhintay.
Atta Elayyan oo asal ahaan kasoo jeeday waddanka Kuwait ayaa xaqu ku haleelay gudaha masaajidka oo uu Salaadda Jimcaha ku tukanayey, waxaana sidaas xaqiijiyey tababaraha xulka qaranka New Zealand ee kubadda Futsal-ka.
Atta Elayyan waxa uu ka tirsanaa xulka qaranka New Zealand ee kubadda futsal-ka
Elayyan oo ay da’diisu ahayd 33 jir ayaa 19 kulan u saftay xulka dharka cad ee Futsal-ka New Zealdn.
“Qalbigayaga meel weyn baa daloosha.” Sidaas waxa yidhi Josh Margetts oo ah tababaraha kooxda NZF Futsal-ka ee qaranka New Zealand.
“Atta waxa uu ahaa nin wanaagsan oo uu qof kasta oo ka tirsan kooxda Futsal Whites jecel yahay iyo sidoo kale bulshada taageerta Futsal. Ma jiraan ereyo aan kusoo koobi karayo sida aanu dareemayno. Si weyn ayaanu u tebi doonaa.” Ayuu Josh Margetts raaciyey.
Kooxda kubadda cagta Wellington Phoenix ee ka dhisan New Zealand ayaa iyaduna tacsi u dirtay qoyska Atta Elayyan iyo dhibbaneyaasha kale ee ku waxyeelloobay weerarkaas lagu xasuuqay muslimiinta.
Ciyaar tartanka Cricket-ka ah oo dhex mari lahayd xulalka New Zealand iyo Bangladesh maalintii Sabtida ayaa la baajiyey, kaddib markii ciyaartoyga reer Bangladesh ay goob-joog ka ahaadeen dhacdadaas, isla markaana ay murugada la qayb-sadeen dadka kale ee Muslimiinta.
“Qalbigaygu wuxuu la jiraa bulshada futsal-ka. Waa dad aad iskugu xidhan oo warkan dhimashada Atta uu ruxi doono dhamaan ciyaarahooda. Waanu dareensanahay xanuunkooda iyo murugadooda.” Sidaas waxa yidhi Andrew Pragnell oo ah agaasimaha fulinta ee NZF.